Nin aduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban: Daawo Guri loogu tala galay inuu soo idleeyo muranka lamaanayaasha. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Nin aduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban: Daawo Guri loogu tala galay inuu soo idleeyo muranka lamaanayaasha.
Nin aduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban: Daawo Guri loogu tala galay inuu soo idleeyo muranka lamaanayaasha.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 14-08-16 7:55 PM Kala go’a ama xiriirka oo idlaada ma’aha mid hada bilaabaneysa waxa ay aheyd mid soo jireen ah iyada oo ay dadka banii aadamka ah ay kala tagaan hadii ay is fahmi waayaan, ama uu dhex maro isfahan darro.
Hadaba asxaabta ku xeran Shabakadda Somalistars waxa aan had iyo goor diirada saarnaa wax yaabaha la yaabka leh ee ka dhacayo dunida aynu saaranahay, anaga oo maanta maqaalkeena kusoo qaadaneyna Guri loo sameeyey Lamaane kala tagayo.
Rag Injineero ah oo u dhashay dalka Netherlands ayaa soo hindisay fikrad ah iney dhisaan guri hadhow labo kala noqonayo, waa marka ay is fahmi waayaan ninka iyo naagtiisa iyada oo ay cidba qaadaneyso qeyb kamid ah guriga.
Shirkaddan fadhigeeda yahay magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa diiday iney wax faah faahin ah ka bixiso dhismahan labada u qeybsamayo, nin u hadlay shirkadaas ayaa hadalkiisa kusoo gaabiyey inuu usoo bandhigi doono dadweynaha qorshaha oo idil dhawaan.